Macluumaadka loogu tala gelay dadka qaxootiga iyo Magangelyo-doonka ah. Raadsashada magangelyo iyo iska diiwaan-gelinta qaab qaxootinimo Malaysia dhexdeeda.
Habka magangalyo ee Malaysia dhexdeeda.
IS DIIWAAN-GELINTA SI QOF QAXOOTI AMA MAGANGELYO-DOON AH.
GO'AAN KA GAADHISTA XAALADDAADA QAXOOTINIMO.
Tallabada ugu horeysa ee habka magangelyada waa isdiiwaan-gelin. Isdiiwaan-gelintu waa duubista, cadeynta iyo cusbooneysiinta macluumaadka qofka UNHCR-tu u shaqayso ama qusayso/danaynayso.
Si aad u dhalbato isdiiwaan-gelin, waa inaad ka codsataa ballan xafiiska UNHCR ee Malaysia. Shakhsiyaadka waxay ka codsan karaan ballan khadka tooska ah iyagoo adeegsanaya Foomka Xiriirka (Contact Form) ee laga heli karo boggan.
Marka aad gudbiso codsigaaga, si naxariis leh u sug in UNHCR ay kula soo xiriirto arima ballanta ku saabsan darteed. Dhammaan codsiyada la diro waa laga shaqeyndoonaa laakiin tirada la soo gudbiyay oo badan awgeed, UNHCR ma awoodi doonto inay isla markiiba kasoo jawaabto. If you have already sent an appointment request, please do not send another.
Ballantaada UNHCR ee Malaysia.
Marka uu xafiiska UNHCR ee Malaysia kula soo xiriiro arimo ku saabsan taariikhda ballanka, waxaad u diyaar garoobi kartaa kulanka.
Dhammaan dadka magangelyo-doonka ah (oo ay ku jiraan xubnaha qoyska ama dadka kale ee ku tiirsan) waa inay joogaan ballanta isdiiwaan-gelinta.
Waa muhiim inaad bixiso macluumaad sax ah, run ah oo dhameystiran marka aad is diiwaan-gelinayso. Macluumaad aan dhameystirneyn ama aan sax ahayn waxay khatar ku tahay kayskaaga.
Waa inaad hubisaa inaad siiso faahfaahinta dhammaan xubnaha qoyskaaga haddii ay kula joogaan Malaysia iyo haddii ay meel kale oo adduunka ah joogaanba. Dhammaan xubnaha qoyska oo ay ku jiraan kuwa sida sharciga ah loo soo korsaday ama dhaqan ahaan. Sidoo kale xubnaha qoyska oo ay ka mid yihiin waalidiinta (dhalashada ama korsashada), walaalaha (buuxa, kala bahda tihiin, lasoo korsaday), carruurta (aad dhashay, lasoo korsaday, carruur guur hore ama xiriir hore).
Qof kasta oo diiwangashan wuxuu heli doonaa lambar fayl. Dhamaan xiriirada dheeraadka ah ee lala sameeyo Xafiiska waa inay muujiyaan nambarka faylka.
Markaad iska diiwaan-geliso UNHCR waxaa lagu siin doonaa kaarka UNHCR ama dukumiintiyo kale oo ay ku xusantahay taariikhda ay shaqaynayaan. Fadlan u tag Xafiiska si aad u cusboonaysiiso kaarkaaga UNHCR ama dukumiintiyada marka uu soo dhawaado taariikhda dhicitaankooduu.
Waa maxay kaarka UNHCR se xaalad noocee ah ayay siisaa dadka wataha?
Shakhsiyaadka la diiwaan-geliyay iyadoo loo marayo nidaamka shaqada UNHCR ee sida u baahaanshaha ilaalinta caalamiga ah waxaa la siin doonaa Kaarka UNHCR ama dukumiintiyo kale oo munaasib ah oo sheegaya in qofka sita kaarka ama dukumiintiga uu ku jiro ilaalinta UNHCR.
Dukumiintiyada aqoonsiga ee UNHCR waxay siisaa watahooda heer ilaalin ah kaas oo yareyn kara khatarta xidhitaanka,waxayna u ogoshahay in uu helo addegyo xaddidan oo caafimaadka, waxbarasho iyo adeegyada kale ee taageerada lagama maarmaanka ah ee y bixiso UNHCR, hay’adaha ay bahwadaagayihiin ama kuwa kale.
Kaarka UNHCR waa dukumiinti aqoonsi oo keliya, kaas oo qiraya inaad kujirto ilaalinta UNHCR. Ku ma laha qiimo sharci oo rasmi ah dalka Malaysia mana aha baasaboor.
Maxaan u baahanahay inaan keeno?
Fadlan soo qaado dukumiinti kasta oo ay soo saartay UNHCR sida kaarka aqoonsiga, warqadda “tixgelinta”, kaarka ballanta, iyo warqadda u gudbinta tixraaca ee taariikhda ballantaada. Dukumiinti kasta oo laga helay Xafiis UNHCR oo aan ahayn kan Malaysia waa in sidoo kale la soo bandhigaa.
Wareysiyada go’aaminta xaaladda Qaxootinimo ee loo soo gaabiyo (RSD) waxaa keliya laga qaadi doonaa kiisas qeybo gaar ah oo leh baahiyo gaar ah oo ilaalineed ama walaac. Waxaa si qaas ah kuula talin doonta UNHCR hadaad u baahantahay inaad marto wareysi RSD oo buuxa.
Xubnaha qoyska ee qaangaarka ah waxaa loo wareysan doonaa si gooni gooni ah. Fadlan hubi inaad dhiibto wixii dukumiinti iyo caddeyn ah ee la heli karo ee ku saabsan dhalabkaaga kuna wargeli UNHCR dhamaan xubinaha qoyska ee kula socda.
Waxaad xaq u leedahay in lagugu wareysto luqad aad wax kula xiriiri karto. Haddii aadan fahmaynin turjubaanka, waa inaad u sheegtaa Sarkaalka UNHCR ee wareysiga qaadaya.
Waxa kale sidoo kale laga yaabaa inuu ku caawiyo wakiil sharci kaas oo u qalma marka la eego habraaca la dejiyey ee UNHCR. Helitaan magangalyo (Asylum Access) waa urur siiya dadka qaxootiga ah caawimaad sharci oo bilaash ah nidaamkan awgii. Si aad u codsato caawimaad, emayl ugu dir malaysia@asylumaccess.org adiga oo adeegsanaya afkaaga sharaxaynaa sababaha aadan ugu laaban karin dalkaaga iyo sababta aad ugu baahan tahay caawimaad xagga sharciga ah.
Muddo intee le’eg ayay qaadanaysaa in go’aan laga gaadho xaaladdayda qaxootinimo?
Tani waxay ku xirantahay nooca kiiskaaga, maadaama ay tahay in kiis walba loo tixgeliyo si gooni ah. Si kastaba ha ahaatee, tirada codsiyada oo badan owgeed Xafiiska socodsiiya ama ka shaqeeya wuxuu qaadan kartaa dhowr bilood in laguu qabto ballan ama aad hesho natiijooyinkaaga. Waxaan kaaga mahadcelineynaa fahamkaaga iyo sabirkaaga.
Kawaran haddii la go’aansado in aanan ahayn qaxooti marka ugu horeysa?
Haddii lagugu soo wargeliyo go’aan diidmo ah kadib wareysiga RSD waxaad xaq u leedahay inaad codsi racfaan ah ku soo gudbiso 30 maalmood gudahood. Marka aad gudbiso rafcaanka, faylkaaga waxaa dib u fiirin doona Sarkaal UNHCR oo ka duwan kii markii hore ku wareystay.
Haddii go’aankii Heerka Koowaad la buriyo, waxaa lagu siin doonaa aqoonsi qaxooti. Haddii go’aankii Heerka Koowaad la xaqiijiyo, faylkaaga waa la xirayaa.
Su’aalaha Badanaa La Waydiiyo
Waa maxay magangelyo-doon
Magangelyo-doonku waa qof muujiyay cabsi uu ka qabo inuu ku laabto dalkiisa hooyo marka uu soo galayo ama ka dib marka uu galo Malaysia. Magangelyo-doonku waa inay buuxiyaan codsi magangelyo si ay UNHCR si rasmi ah oogu diiwaangeliso inay yihiin dad magangalyo-doon ah.
Is diiwaangelinta magangalyo-doon kadib, habraaca go’aaminta xaaladda qaxootinimo ayaa la sameyn doonaa si loo go’aamiyo yaa qaxootiga ah. Iyadoo uusan jirin sharci qaran, UNHCR waxay go’aamisaa qofka qaxootiga ah iyadoo lagu saleynayo qeexitaankii qaxootiga ee Heshiiskii la xiriiray Xaaladda Qaxootiga ee 1951 iyo waajibaadkeeda u gaarka ah.
Magangelyo-doonka waxaa laga ilaaliyaa in Khasab loogu celiyo wadankoodii hooyo laga bilaabo marka ay muujiyaan cabsi ay ka qabaan ku laabashada ilaa go’aanka kama dambaysta ah ee Xaaladda qaxootinimada ay ka gaarto UNHCR.
Haddii aad ka baqeyso inaad ku laabato waddankaagii hooyo, ama waddankii aad hore u degenayd, sababtoo ah waxaad khatar ugu jirtaa inaad la kulanto waxyeelo daran sababa la xiriira haybteeda/qabiilkaaga, diintaada, dhalashadaada, fikirkaaga siyaasadeed, ama ka mid noqoshada koox bulsho oo gaar ah, waxaad ka dalban kartaa magangelyo Malaysia.
Waa maxay Qaxooti?
Qaxooti waa qof lagu qasbay inuu ka cararo/qaxo dalkiisa maxaa yeelay dagaal, rabshad, ama cadaadis la xiriira habta/qabiilka, diinta, dhalashada, fikirka siyaasadeed, ama ka mid noqoshada koox bulsho oo gaar ah. Qofka Qaxootiga wuxuu qabaa cabsi sax ah oo uu ka cabsanayo cadaadis, cabsidaas darteedna, kuma noqon karo wadankiisa/gurigiisii ama wuxuu ka baqayaa inuu ku laabto maxaa yeelay ma awoodi doonaan inay halkaas ka helaan badbaado ama ilaalin.
Is diiwaangelinta magangalyo-doon kadib, habraaca go’aaminta xaaladda qaxootinimo ayaa la sameyn doonaa si loo go’aamiyo yaa qaxootiga ah. Iyadoo uusan jirin sharci qaran, UNHCR waxay go’aamisaa qofka qaxootiga ah iyadoo lagu saleynayo qeexitaanka qaxootiga ee Heshiiska la xiriira Xaaladda Qaxootiga ee 1951 iyo waajibaadkeeda u gaarka ah.
Dadka Qaxootiga waxaa laga ilaaliyaa in qasab loogu celiyo waddankooda ay u dhasheen.